နမ့်ပေါ်ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ဖြစ်မြောက်ရေး အကောင်အထည်ဖော်မှုအဆင့်ဆင့် မှတ်တမ်း | ဂရိတ်ဟော်ခမ်း
နမ့်ပေါ်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းသည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ လက်ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်း ထဲတွင် အဓိကအရေးပါသည့် စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ သည် ရေအားလျှပ်စစ်တွင် အဓိကထားပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရခြင်း ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ -
၁။ ဒေသခံများအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ ရရှိစေရန်၊
တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရလျှင် ဒေသ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်မှု ပိုမိုမြင့်မားနေခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဒေသန္တရဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်းတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အခြေခံအဆောက်အဦ
လုပ်ငန်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ နမ့်ပေါ်ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း၏ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့်ကို ရှယ်ယာရှင်များသိရှိနိုင်ရန် အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းအားဖြင့် ဖော်ပြပါမည်။
နမ့်ပေါ်ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းအတွက် အကြိုဖြစ်နိုင် ခြေစူးစမ်းလေ့လာမှု (Pre-Feasibility Studies) ကို တရုတ် နိုင်ငံ ကူမင်း အင်ဂျင်နီးယားရင်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် (KHIDI) က ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သည်။
KHIDI ၏ အကူအညီဖြင့် အကြိုဖြစ်နိုင်ခြေစူးစမ်းလေ့ လာမှုပြုပြီးနောက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်တွင် စီမံကိန်းအဆိုပြုလွှာကို ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှတစ်ဆင့် အဆင့်ဆင့်တင်ပြခဲ့ပြီး အဆိုပါနှစ်၏ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်အစိုးရထံမှ “မူ”အားဖြင့် သဘောတူကြောင်း ပြည်ကြားခဲ့ပါသည်။ ယင်းနောက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရနှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (M.O.U) ကို ရေးထိုးနိုင်ခဲ့သည်။
နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ရေးထိုးပြီးနောက် တမံဧရိယာ အတွင်း ကျရောက်နေသည့် စိုက်ပျိုးမြေများအတွက် ခရိုင်မြေယာလျော်ကြေးစိစစ်ရေးအဖွဲ့နှင့် မြို့နယ်မြေယာတိုင်းတာစိစစ်ရေး အဖွဲ့တို့မှ ကုမ္ပဏီနှင့် စိုက်ပျိုးတောင်သူများအကြား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးမှုဖြင့် ကျပ်သိန်းပေါင်းလေးထောင်ကျော်ကို ပေးလျော်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် မြေဧရိယာ ၁၇၉ ဧကကိုလည်း မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေး ဗဟိုကော်မတီထံမှ အခြားနည်းအသုံးပြုခွင့်ကိုလည်း ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့တွင် ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
တမံအထက်ပိုင်းရှိ ရေလွှမ်းဧရိယာအတွင်း ကျရောက် သော အထက်နမ့်ပေါ်(တာလုံ)တံတား၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း နှင့် ရဲကင်းတို့ကို ပြန်လည်နေရာချထားရန်အတွက် စီမံချက် နှင့် ဒီဇိုင်းများ ရေးဆွဲလျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ စီမံချက်နှင့် ဒီဇိုင်းများပြီးစီးပါက လျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဌာနထံသို့ တင်ပြ ပြီး ပြန်လည်နေရာချထားရေးလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရှမ်းပြည်အစိုးရနှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာရေးထိုးနိုင်ခဲ့သော်လည်း ဖြစ်မြောက်ရေး အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင် ကြန့်ကြာစေခဲ့သည့် အကြောင်းရင်းတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပါ သည်။ ယင်းမှာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ရေးထိုးပြီးရက်ပေါင်း ၂၀ အကြာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ လျှပ်စစ်ဥပဒေကို ပြဌာန်းလိုက်သည်။ အဆိုပါ လျှပ်စစ်ဥပဒေတွင် ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရာ၌ ၁၀ မဂ္ဂါဝပ်အထိ ထုတ်လုပ်မှုသည် အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်၊ ၁၀ မဂ္ဂါဝပ် အထက်နှင့် ၃၀ မဂ္ဂါဝပ်အောက် ထုတ်လုပ်မှုသည် အလတ်စားရေအားလျှပ်စစ်၊ ၃၀ မဂ္ဂါဝပ် အထက်ထုတ်လုပ်မှု မျိုးသည် အကြီးစားရေအားလျှပ်စစ် ဟူ၍ ၃ မျိုးခွဲထားသည်။ ယင်းလျှပ်စစ်ဉပဒေတွင်ပင် အခန်း ၄၊ ပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က) တွင် ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရာ၌ အသေးစားနှင့် အလတ်စားရေအားလျှပ်စစ်ကို တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသော်လည်း မည်သည့်ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုများမဆို မဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် လိုအပ်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားသည်။ ထို့ကြောင့် မကြာသေးခင်က ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရနှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ရေးထိုးပြီးခါစဖြစ်သည့်
ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအများပိုင်ကုမ္ပဏီသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရပြန်သည်။ ယင်းသည် နမ့်ပေါ်ရေအားလျှပ်စစ်ဖြစ်မြောက်ရေး အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင် ၉ လခန့် ကြန့်ကြာစေခဲ့သည်။
ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်မှု စက်ရုံတစ်ခု ဖြစ်မြောက် အောင်မြင်ရေးသည် လွယ်ကူသည့် အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ပေ။ ပထဝီ၊ ဘူမိဗေဒ၊ ဇလဗေဒ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် များနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သည့် အကြောင်းရင်းများစွာကို သေချာ ဃဏစွာ စူးစမ်းလေ့လာရပါသည်။ အချက်အလက်များစွာကို စူးစမ်းလေ့လာပြီးနောက် သင့်လျော်သည့် တမံဒီဇိုင်း၊ ကုန်ကျမှု စသည်များကို ထည့်တွက်ရပြန်သည်။
ရေအားလျှပ်စစ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အချို့သော နည်းပညာ ဝန်ဆောင်မှုများသည် ပြည်တွင်း၌ မရရှိနိုင်သေးပေ။ ထိုကဲ့သို့ သော နေရာမျိုးအတွက် နိုင်ငံခြားပညာရှင်များနှင့် နိုင်ငံခြား နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများကို ငှားရမ်းအသုံးပြုရပါသည်။
နမ့်ပေါ် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းအတွက် ဒီဇိုင်း၊ ဒီဇိုင်းကြီးကြပ်မှုများအပါအဝင် ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း စူးစမ်းလေ့လာမှု (Feasibility Stydy) ပြုလုပ်ရန်အတွက် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းက တရုတ်နိုင်ငံ၊ Hunan Hydro and Power Design Institute (HHPDI) ကို အပ်နှံခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက် နေ့တွင် နှစ်ဉီးနှစ်ဖက် စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင် အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ် စူးစမ်းလေ့လာခြင်း (EIA & SIA)
စီမံကိန်း၏ ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း စူးစမ်းလေ့လာမှု ပြုပြီးနောက် ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်နိုင်သည့် အခြေအနေမျိုးတွင်ပင်ရှိသော်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်အပေါ် ဆိုးကျိုးသက် ရောက်မှုများ ရှိမရှိ၊ ရှိခဲ့သော် မည်သို့မည်ပုံဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်မှုရှိမရှိ စသည်ဖြင့် လေ့လာသုံးသပ်ရပြန်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လူမှုဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုပေါ် စူးစမ်းလေ့လာရန်အတွက် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းကုမ္ပဏီသည် မြန်မာစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အင်ဂျင်နီယာဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် (MSDES) နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် ဂရပ်ဖ်-၀၁ ပါ စီမံချက်အတိုင်း လုပ်ငန်းစတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ဂရိတ်ဟော်ခမ်းမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုသည့် နမ့်ပေါ်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းသည် နိုင်ငံတကာစံချိန်မီဖို့ အရေးကြီးသည်။ သို့မှသာ အရည်အသွေးအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး လူမှုဝန်းကျင်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်မည်။ ထိုကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာစံချိန်မီ အရည်အသွေးမျိုး ရရှိနိုင်စေရန် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းအတွက် တည်ဆောက်မည့်တမံဒီဇိုင်း၏ ကြံ့ခိုင်မှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ လေ့လာသုံးသပ်ချက်ကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် ရေအားလျှပ်စစ်နှင့် တမံတည်ဆောက်ရေးပိုင်းတွင် ဝါရင့်ကျွမ်းကျင်သည့် ဂျာမနီနိုင်ငံ SYDRO Consult ကုမ္ပဏီအား အပ်နှံခဲ့သည်။ ယင်းဝန်ဆောင်မှုအတွက် SYDRO Consult ကုမ္ပဏီနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့သော တမံကြံ့ခိုင်မှု လေ့လာသုံးသပ်ချက်သည် အရေးကြီးသလောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ဆောက်ထားသည့် တမံများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုမှုမရှိသေးကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
အထက်ပါ ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဂျာမနီနိုင်ငံ SYDRO Consult ကုမ္ပဏီမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်သည် တမံ၏ကြံ့ခိုင်မှု နှင့် ရေကြီးခြင်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်မှုများကို ထိရောက်စွာ ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာ လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် နမ့်ပေါ်ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းတည်ရှိရာနေရာနှင့် တမံအောက်ပိုင်းရှိ ရွာများသို့ ကိုယ်တိုင် သွားရောက်လေ့လာပြီး အချက်အလက်များကို စုဆောင်းလေ့လာ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ရေကြီးခြင်း အန္တရာယ်ဖြစ်မှုများတွင် ဆုံးရှုံးမှု နည်းသထက် နည်းစေရန် အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု စီမံချက်နှင့်ပတ်သက် ပြီး ဌာနဆိုင်ရာများ၊ တမံအောက်ပိုင်းရှိ ရွာများမှ အကြီးအကဲ များနှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နှင့် ၂ ရက်နေ့များတွင် မူဆယ်မြို့ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏စီမံကိန်းရုံး ဆင်းရွှေလီခန်းမ၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အသိပညာဖလှယ်ပွဲတစ်ခု ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။
ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် နမ့်ပေါ်ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း အတွက် လိုအပ်သော ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကို ပြင်ဆင်ပြီး နောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ လျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာနနှင့် B.O.T (တည် ဆောက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းပေးခြင်း) စနစ်ဖြင့် ပဋိညာဉ်စာချုပ် ချုပ်ဆို နိုင်ခဲ့သည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဝယ်ယူမှု သဘောတူ စာချုပ် (P.P.A.)
ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် လက်ရှိအချိန်တွင် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဝယ်ယူမှု သဘောတူ စာချုပ် (P.P.A) ချုပ်ဆိုနိုင်ရန်အတွက် စာချုပ်မူကြမ်း ပြင်ဆင်ထားလျက်ရှိပြီး မကြာမီတွင် ချုပ်ဆိုနိုင်ရန် ခန့်မှန်းထားသည်။
စီမံကိန်း ကုန်ကျမှုနှင့် IRR
နမ့်ပေါ်ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး၏ ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၀.၆၀ သန်း ဖြစ်သည်။ ယင်းကုန်ကျမှုအတွက် IRR မှာ ၉% ဖြစ်သည်။ သို့သော် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟူနန်မြို့ HHPDI ရုံးချုပ်၌ ဒီဇိုင်းပြန်လည်ဆန်းစစ်မှု (Design Optimization) ပြုလုပ်ခဲ့ပြီ၊ စီမံကိန်းကုန်ကျမှုစရိတ်ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကာ စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း အထိုက်အလျောက် လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် တာဝန်ယူမှုများ
ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် အများပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့်အား လျော်စွာ ကုမ္ပဏီဖော်ဆောင်မည့် စီမံကိန်းတိုင်းသည် ပွင့်လင်း မြင်သာမှု၊ လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အကျိုးရှိမှုများကို အလေးထားပြီး ဆောင်ရွက်သည်။ ဤ နမ့်ပေါ်စီမံကိန်းတွင်လည်း ယင်းမှ ထွက်ရှိလာမည့် မျှော်မှန်း
အသားတင်အကျိုးအမြတ်၏ ၁% ကို လူမှုဝန်းကျင်ပူးပေါင်းတာဝန်ယူမှုအတွက် (CSR) နှင့် ၂% ကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲရေး အစီအစဉ် (EMP) အတွက် အထောက်အပံ့ပေးရန် လျာထားပါသည်။
စီမံကိန်းအတွက် အကြိုအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများဖြစ် သော စီမံကိန်းချဉ်းကပ်လမ်း၊ စီမံကိန်းအတွင်းလမ်း၊ စီမံကိန်း ရုံး၊ အရာရှိရိပ်သာ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ၊ အလုပ်သမားတန်းလျား၊ ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံ၊ စက်ပြင်အလုပ်ရုံ၊ ကွန်ကရစ်ဖျော်စက်၊ ချောင်းကူးဘေလီတံတား၊ ၆၆ ကေဗွီ နှင့် ၁၁ ကေဗွီ ဓာတ်အား လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
စီမံကိန်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် စတင်နိုင်ရန် လျာထားပါသည်။
နမ့်ပေါ် ရေအားလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်ပေါ် ထိခိုက်မှုကို လေ့လာခြင်း (ESIA)
စီမံကိန်း၏ ဖြစ်နိုင်ခြေ စူးစမ်းလေ့လာမှု ပြုပြီးနောက် ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်နိုင်သည့် အခြေအနေမျိုးတွင်ပင် ရှိသော်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်ပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိ မရှိ၊ ရှိခဲ့သော် ဘယ်လို ဘယ်ပုံဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်မှု ရှိ မရှိ စသည်ဖြင့် လေ့လာသုံးသပ်ရပြန်သည်။ ယင်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုပေါ် စူးစမ်းလေ့လာရန်အတွက် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းက မြန်မာစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အင်ဂျင်နီယာ ဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် (MSDES) နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။
MSDES မှ ထုတ်ထားသည့် နယ်ပယ်အတိုင်းအတာ သတ်မှတ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ) ကို ဤနေရတွင် ရယူနိုင်သည်။ (website link လုပ်ရန်)
တမံ ပျက်စီးမှု လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (Dam Breaking Analysis)
ဂရိတ်ဟော်ခမ်းက ကိုယ်တိုင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်သည့် နမ့်ပေါ်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းသည် နိုင်ငတကာချိန်မီဖို့ အရေးကြီးသည်။ သို့မှသာ အရည်အသွေးအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး လူမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ကောင်းကျိုး ဖြစ်ထွန်းနိုင်မည်။ ထိုကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာချိန်မီ အရည်အသွေးမျိုး ရရှိနိုင်စေရန် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းအတွက် တည်ဆောက်မည့် တမံများ၏ ပျက်စီးမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ လေ့လာသုံးသပ်ချက်ကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဂျာမနီနိုင်ငံ Sydro ကုမ္ပဏီအား အပ်နှံခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။
ဤ တမံပျက်စီးမှု လေ့လာသုံးသပ်ချက်သည် အရေးကြီးသလောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ဆောက်ထားသည့် တမံ တော်တော်များများတွင် ဆောင်ရွက်မှုနည်းပါးနေသေးကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် နမ့်ပေါ်ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းအတွက် လိုအပ်သော ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကို ပြုလုပ်ပြီး နောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ လျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာနနှင့် B.O.T (တည်ဆောက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းပေးခြင်း) စနစ်ဖြင့် နှစ် ၇၀ (ပထမ နှစ် ၅၀၊ ပြီးလျှင် ၁၀ နှစ်စီ နှစ်ကြိမ်ထပ်တိုးနိုင်) ပဋိညာဉ် စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။
လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝယ်ယူမှု သဘောတူ စာချုပ် (P.P.A.)
ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် လက်ရှိအချိန်အထိ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝယ်ယူမှု သဘောတူစာချုပ် (P.P.A) ချုပ်ဆိုခြင်း မရှိသေးပေ။ သြဂုတ်လအတွင်းတွင် ချုပ်ဆိုနိုင်ရန် ခန့်မှန်းထားမှုတော့ ရှိသည်။
စီမံကိန်း ကုန်ကျမှုနှင့် အရင်းကျေကာလ
နမ့်ပေါ်ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးအတွက် ကုန်ကျမှု တွက်ထားချက်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၀.၆၀ သန်းဖြစ်သည်။ ယင်းကုန်ကျမှုအတွက် IRR ၁၂.၆၅% ဖြင့် အရင်းကျေကာလမှာ ၁၄ နှစ်ဖြစ်သည်။ ဤအရင်းကျေကာလ တွက်ချက်မှုသည် စုစုပေါင်းရင်းနှီမြုပ်နှံမှုတွင် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ကိုယ်ပိုင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ၃၀%၊ ချေးငွေ ၇၀%၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရောင်းစျေး ၁ ကီလိုဝပ် ၆၅ ကျပ်နှုန်း၊ ကုန်သွယ်ခွန် ၅%၊ ဝင်ငွေခွန် ၂၅% စသည့် အချက်များပေါ် အခြေခံပြီး တွက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟူနန်မြို့ HHPDI ရုံးချုပ်၌ ဒီဇိုင်းပြန်လည်ဆန်းစစ်မှု (Design Optimization) အတွက် ဆက်လက်ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ စီမံကိန်းကုန်ကျမှုစရိတ်ကိုလည်း ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကာ သင့်တင့်လျောက်ပတ် သည့် စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း လျှော့ချနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယူဆသည်။
အရင်းကျေကာလ ၁၄ နှစ်ဆိုသော်လည်း ဒီဇိုင်းနှင့် စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ် ပြန်လည်ဆန်းစစ်မှုကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချနိုင်လျှင်ဖြစ်စေ၊ စီမံကိန်း စုစုပေါင်းကုန်ကျမှု၏ ၇၀% ချေးငွေ ယူထားခြင်းဖြစ်ရာ ချေးငွေရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချနိုင်လျှင်ဖြစ်စေ အရင်းကျေကာလ ပို၍ တိုတောင်းလာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
လူမှုရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အထောက်အပံ့များ
ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် အများပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ကုမ္ပဏီ ဖော်ဆောင်မည့် စီမံကိန်းတိုင်းသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ အများပြည်သူနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အကျိုးရှိမှုများကို အလေးထားပြီး ဆောင်ရွက်သည်။ ဤနမ့်ပေါ်စီမံကိန်းတွင်လည်း ယင်းမှ ထွက်ရှိလာသည့် အကျိုးအမြတ်၏ ၁% ကို လူမှုရေးကူညီမှု (CSR) အတွက်နှင့် ၂% ကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး (EMP) အတွက် အထောက်အပံ့ပေးရန် လျာထားပါသည်။
စီမံကိန်း ကြိုတင် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများ
စီမံကိန်းအတွက် အကြိုအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် စတင်ပြီး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ အကြိုအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းမှာ ၃.၅ ကီလိုမီတာရှိ စီမံကိန်းချဉ်းကပ်လမ်း၊ ၇ ကီလိုမီတာ အရှည်ရှိ ၆၆ ကေဗွီ မဟာဓာတ်အားလိုင်း၊ တမံတည်ဆောက်မည့် စီမံကိန်းအတွင်းလမ်းများ၊ စခန်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် တမံအောက်ဖက် ခန်းဖွင့် ၃၀ မီတာ အရှည်ရှိ ချောင်းကူး ဘေလီတံ တားတည်ဆောက်ခြင်းများပါဝင်ပြီး လေးလအတွင်း အပြီးသတ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။